Fantenany ny tsara hankao an-karona...
Alakamisy 30 jolay 2020 — Herinandro faha-17 mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Matio 13, 47-53 — Mahatoky amin'ny teniny rehetra ny Tompo, ary tsara fo amin'ny asany rehetra.
Ry kristianina havana, ny Evanjely naroson’ny Fiangonana ho vakina mandritra ity herinandro ity, dia manambara sy manoritsoritra bebe kokoa amintsika ary mampahafantara misimisy kokoa ny toetoetran’izany atao hoe fanjakan’ny Lanitra izany. Fanoharana hatrany no entin’i Jesoa milaza sy mampitaha izany, mba ho azontsika antenaina tokoa ny fivantanana any rahatrizay.
Noho izany, oharin’i Jesoa amin’ny alalan’ny harato nalatsaka tanaty ranomasina izany. Izany hoe : hatramin’ny naharian’Andriamanitra an’izao tontolo izao dia nataony toy ny harato hanangonana ny olombelona rehetra eto ambonin’ny tany ny teniny, ka hanangona ny tsara sy ny ratsy rehetra na ny olo-marina na ny olon-dratsy ho eo amin’ny fitsarany indray andro any. Amin’io fotoana io, Izy Andriamnitra no hanavaka ny olo-marina sy olon-dratsy fiaina rehetra, ka ny olo-marina harosony ho ao amin’ny fanjakany, nomaniny hatrizay ela izay ; ny olon-dratsy kosa havariny any amin’ny memy mirehitra afo mandrakizay. Ary amin’io fotoana io ihany koa no hanavahan’Andriamnitra ireo olona naharitra nifikitra tamin’ny teniny, nanao ny marina sy ny tsara teo amin’ny fiainana. Fa ireo nahalala kosa ka ninia tsy nanao ny marina sy ny tsy rariny ary ny tsy hitsiny teo amin’ny fiainana dia nitahiry rakitra ratsy ho an’ny fiainany mandrakizay.
Koa ataovy an-tsaina àry ho antsika kristianina, na ireo mitonona ho mpanara-dia an’i Kristy fa tsy maintsy ho tonga ny fotoana hanavahan’Andriamanitra ny tsara sy ny ratsy, ny olo-marina sy ny tsy marina. Ireo izay ho mendrika ho zanak’ondry dia hiroso eo amin’ny fanjakany, fa ireo ambodia mitafy hodi-janank’ondry kosa dia ho any amin’ny fahaverezana mandrakizay. Koa tsy afaka hanao na inona na inona amintsika intsony Andriaminitra amin’izay fotoana izay fa manaja tanteraka ny safidintsika Izy. Koa omano sy iaino dia ny ety an-tany ny paradisa ho vantanintsika rahatrizay, amin’ny alalan’ireo fomba fiainana mendrika an’Andriamanitra.